Trekpụrụ 10 iji lelee na Digital Marketing maka 2016 | Martech Zone
Anyị nwere nnukwu azụmaahịa ahịa na-abịa ebe anyị na-atụle mgbanwe ndị dị ịtụnanya na-eme n'ime mpaghara ahịa ọdịnaya nke ahịa dijitalụ. Mana ahịa dijitalụ na-aga n'ihu na-agabiga mgbanwe ndị dị ịtụnanya. Ihe omuma a site na Cube kwuru ihe kachasị ọhụrụ ndị ahịa kwesịrị ịhụ na 2016.
Ndị a bụ 10dị XNUMX na Digital Marketing
Laghachi na ulo oru mbo - infographic ahụ na-ekwu maka ịfefe ọnụọgụ ihe efu dịka okporo ụzọ na mbak, mana ekwenyere m na omume ikiri ka mma Attribution n'ime nchịkọta Ngwaọrụ.
Chee echiche Global kama nke Mpaghara - asụsụ dị iche iche, ezigbo oge ntụgharị asụsụ, na ịchụ mba ụwa niile na-eme ka azụmahịa na-aga ozuru ụwa ọnụ. Ghara ikwu na mbupu na-akwado ya.
Personalization - itinye aka na ọnụego ntụgharị na-abawanye mgbe ozi ahaziri iche dabere na oge, omume, ọnụọgụ na ọnọdụ nke onye zụrụ ya.
Mmebe nke Data Science - nnukwu teknụzụ data enwere ike ịnweta ndị mmadụ ma obere na azụmaahịa na-enweta ohere ị nweta data ịkọ amụma ha echeghị na ọ ga-ekwe omume.
Ikwalite ekwentị - mobile ngwa ọdịnala, na-elekọta mmadụ media, video, mobile nchọgharị, ebe dabeere na mobile nchọgharị… na mobile ngwaọrụ ugbu a Central anyị online aka.
Marketing ahịa - na-achọ ndị nwere ọdịnihu gị ma soro ha rụọ ọrụ iji metụta ndị na-ege ntị na-enwe nsonaazụ dị egwu dị ka ngosipụta na itinye aka na-achọ.
Ezinyere ma mezuo n'ezie - Cube a kpọtụrụ aha na kwalite asụsụ ọma, mana echeghị m na ọ ga-abụ nnukwu azụmahịa ka eziokwu dịwanye elu. Ikike iji meziwanye njikọ anyị na ụwa anyị bi na ya yiri ka enwere ọtụtụ ohere n'uche m.
Ndepụta ngwa - iwu ulo iji nyere ndi ọbịa aka kwesiri idi isi na ahia ahia di iche. Anyị wuru a unit akakabarede mgbako maka onye na-emepụta kemịkal nke ghọworo ihe kachasị mma na ụlọ ọrụ ha ma jiri ya na onye ọ bụla na ahịa ha lekwasịrị anya - na-eduga n'ọmụma na ntụgharị.
Egwuregwu Wearable na IoT - Ahia ahia na ichota teknụzụ weara na-enye ohere di uku maka ulo oru ka ha na emekorita ma na-agbasa ozi ozugbo ebe ndi mmadu ma obu ndi ahia na-ege nti.
Ahịa Omni-Channel - Mgbanwe nke ntanetị na ntanetị na-agbanwe. Ọbụna ọ na-eweghachite ụfọdụ ahịa ọdịnala ebe a nụrụ ozi gị naanị n'ihi na asọmpi adịghị.
Tags: 2016kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwunnukwu datasayensị dataahia dijitalụazụmahịa zuru ụwa ọnụahịa ahịainternet nke iheiotMobile na Mbadamba ụrọntinye ederede ngwamobile ngwa ọdịnalakeonwelaghachi azụmaahịaROIọnọdụomume na-ekiriomume ọmateknụzụ siri ike